halkee inagalahaystaa buug cusub liban eco
Noolaha dunida waxeey jecelyihiin ama naftoodu tabtaa nabad! Qofkasta ee naga mid ah waxuu ku xiranyahay, oo naf ahaan, shaqsi ahaan, maskax ahaan iyo jir ahaanba ugu baahanyahay nabad iyo nolol! Nolol ma jireeyso, hadii aysan nabad jirin, nabadna ma jireeyso hadii aysan nolol jirin.
Nolosha bani, aadamka ee badanaa macaankeeda lagu tilmaamo maalka,caruurta, lamaanaha isjecel, cilmiga sare iwm. Waxeey baabbadaa markii Nabad la waayo. Nabadu waa hal eray oo waxyaabo badan oo kala duwan loo adeegsado, kuna xiran hadba bulshada qofku ku dhex koray, iyo micnaha markaas lagaleeyahay. Hadaba siyaasiyiinta kala duwan ee dunida waxeey ka hadlaan ama isticmaalaan qudbad kasta oo ay aqrinayaan erayga ” Nabad” Si ay u soo jiitaan dhegaha shacabkooda, uguna qanciyaan bulshada in ay wanaag ku maqanyihiin. Waxaa dhaca in erayga nabad ay adeegsadaan niman ayaga hub wata, ee wax dilaaya, ayagoo ku marmarsiyoonaaya in dadka la dilaayo ay diidanyihiin nabad! Waxaad na arki kartaa in dad badan u riyaaqaayaan in la dilo qofkasta ee diidan NABADA! Waxaan badanaa hilmaanaa in nabadi jiri karin inta ay jiraan kuwa nagamid ah ee wata Hub,sameeynaayo hub wax baabi’iya sida nukliyeerka, ama sun lagu buufiyo noolaha oo idil siloo waayo wax dhulkaas ku nool. Nabad ma jireeyso inta aan taageereeyno in wiilkeena, ninkeena, walaalkeena, aabaheena iyo qofkasta ee hub qaad ah aan tuseeyno saaxiibtinimo iyo kalgaceyl cabsi aan ka qabno darteed in ay nagu dhuftaan xabada ay wataan. Nabad ma jireeyso inta aan u ogolaaneeyno in hooyada uurka leh agteeda qoray laga rido, ama madfac lagu soo tuuro, si cunuga caloosheeda ku koraaya loo qaadsiiyo cudurka nabad la’aanta!
Waa maxay NABAD?
Nabadi waa waxkasta oo nafta dejiya, kana bixiya cabsida iyo qalqalka
nafsiyadeed. Nabad waa degenaansho, waa kalsooni, waa isjecayl, wada hadal iyo waliba wada shaqeeyn. Nabad waa in aad ku dhex noolaatid bulsho isku duuban, oo dhib iyo dheefba wada qabo, salaanta isku faafiya, wajiyadooda farxada iyo qosolka ka muuqdaan, qofwalba qofka kale la jecelyahay wanaaga, iyo horumarka. Nabad waxaad aragtaa markii aad u ogolaatid qofkasta in uu helo waxkasta oo aad adiga jeceshahay, kuna qanacsantahay oo aad dartood u faraxdid. Nabad waxaad aragtaa markii aad joogtid dal madaxweeynihiisa dhex maraayo shacabkiisa, asagonan askari ilaalineeynin, qofkasta ee ka horyimaada inta uu socdo xafiiska shaqadiisa oo salamaaya, qofkuna aragiisa ku farxaayo.
Nabad waxaad aragtaa markii aad aragtid hooyooyin iyo caruur, macalimiin iyo arday, madax iyo shaaqaale, waayeel iyo waxgarad is dhex socdo, oo garbaha is heeysta, una wada sujuudo, oo u wada mahad celiyo Rabiga abuuray, oo isjecleysiiyay, nabadana isjecelkooda, daacadnimadooda iyo iimaankooda dartood ugu deeqay. Hadaba nabad waxay ka soo dhex baxdaa oo hela Bulsho isku kalsoon, isjecel, walaaltinimo iyo wanaag wax ku qaybsada, wada hadal iyo dantooda guudna wada ilaalshada, dan gaar ahna aan laheyn. Nabad waxaad aragtaa markii aabaha wiilkiisa baraayo in uusan laheeyn dan ama arin ka duwan tan bulshada uu ku dhex noolyahay, una sheego in markii la gaaro danta guud ee dalka, dadka iyo diinta wada leeyihiin, uu asna gaari doono dantiisa gaarka ah. Ileen hadii dan guud jirina, mid gaar ah ma jireyso, hadii Bulsho jirin, shaqsi ma jiro!